20 Kununurwa Munamato Kuti Putsa Zvitukwa Uye Zvipenga | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Kununurwa Munamato Kuti Vhure Curses Uye Spell
2 Madzimambo 2: 18-22:
18 Zvino pakudzoka kwavo kwaari (nekuti wakange agere paJeriko), akati kwavari: Ini handina kureva here kuti: Musaenda? 19 Zvino varume veguta vakati kuna Erisha, "Tarira zvino, guta iri rinofadza, sezvatinoona ishe wedu, asi mvura haina, uye pasi risingabereki. 20 Iye akati, Ndivigire ndiro nyowani, muise munyu mukati mayo. Uye ivo vanouya nazvo kwaari. 21 Akabuda akaenda kutsime remvura, akakanda munyu mukati, akati, "Zvanzi naIshe, Ndaporesa mvura iyi, hapangazovipozve kubva ipapo rufu kana nzvimbo isingabereki. 22 Naizvozvo mvura ikapwa, kusvikira nhasi, sezvakataura Erisha.
Pano pane makumi maviri kudzidzisa munamato kuputsa kutukwa uye zviperengo. Bhaibheri rinotiudza kuti hatigone kutukwa kana kuve mhombwe, Numeri 23:23. Chero Mukristu anotambura nechero nzira yekutuka anongotambura mukusaziva. Bhaibheri rakaburitsa pachena kuti hapana chombo chakagadzirirwa kutirwisa chingabudirira, Isaya 54:17, izvi zvinoreva kuti tiri pamusoro pekurwiswa nadhiabhori. Nekudaro, dhiabhori mweya wakasindimara, achaenderera achikurwisa iwe nguva dzose, unofanira kuramba uchimudzivisa wakasimba. Tinofanira kusimba paatari yemunamato, kana iwe uchida kukunda masimba akamira munzira yako yekubudirira, unofanirwa kuve nemunamato. Tinotenda Mwari nezvaakatiitira tese muna Kristu, asi avo chete vanotenda ndivo vanogona kubatsirwa, uye kana isu tikanamata, tinoratidza Mwari kuti tinotenda maari uye nezvaakatipa muna Kristu Jesu.
Munamato kuratidzwa kwekutenda, uye kutenda ndiko kunoita kuti tibudirire 1 Johane 5: 4. Munamato wekununurwa uyu kuti uputse kutuka kwese uye zviperese uchaunza kununurwa kukuru kwauri sezvaunonamata. Iwe uchasunungurwa kubva kumhando ipi neipi yehumwari kubva kuna dhiabhori nevamiriri vake iyo yave ichitambudza hupenyu hwako. Ivo Ishe vanozokupa kukunda kubva kumatambudziko ese auri kurwa nawo. Mwari werudzikunuro rukuru vachasimuka kuzvidzivirira nekurwira hondo dzenyu paunenge uchiita munamato wokununura. Shamwari yangu inodikanwa, nyengetera uyu munamato nekutenda uye unotarisira kununurwa kukuru muhupenyu hwako.
1. Baba ndinokurumbidzai nekuda kwesimba rekudzikunura muropa raJesu.
2. Baba ndinokurumbidzai nekutidzikunura kubva pakutuka kwemutemo.
3. Baba ndiregerereiwo pazvivi zvese zvakapa muvengi kodzero yepamutemo yekuisa chero rushambwa pandiri nepamba rangu muzita raJesu.
4. Baba, neropa renyu rinokosha mushambidze zvivi zvangu muzita raJesu
5. Ini ndinotora simba pane chero chituko, zvitsinga nehuroyi pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
6. Ini ndinoraira kuti kutukwa kose kwakapihwa kwandiri kuturwe, muzita raJesu.
7. Ini ndinoraira mweya yakaipa yese inosanganiswa nekutuka chero kupi kundisiya izvozvi, muzita raJesu.
8. Ini ndinotora simba pamusoro pezvatakapiwa nhaka uye ndinoraira kuti vapuwe izvozvi, muzita raJesu.
9. Ndinotora simba pamusoro pekutukwa kunobva mumutsara wemadzitateguru uye ndinoraira kuti kutyorwa izvozvi, muzita raJesu.
10. Muzita raJesu, ndinotyora chero chituko chingave chiri mumhuri dzevabereki vangu kusvika kuzvizvarwa gumi muzita raJesu.
11. Ini ndinorega uye ndinotyora kutuka kese kunoiswa pamutsara wemhuri yangu nevazukuru vangu, muzita raJesu.
12. Ini ndinoraira mweya yetsvina yega yega yekutuka nekutuka kuti undisunungure uende zvino, muzita raJesu
13. Ini ndinotyora kutuka kwese kwekutadza kuramba ndichishanda mumhuri yangu, muzita raJesu.
14. Ini ndinotora simba pamusoro pechose kutuka kwekusagadzikana mumhuri yangu, muzita raJesu.
15. Ndinodzima mhedzisiro uye yakaipa mhedzisiro yekutuka kese, muzita raJesu.
16. Ini ndinotora simba pamusoro pese kusaziva kana playful kutukwa kwakapihwa pandiri, muzita raJesu.
17. Rega midzi yehupenyu hwangu icheneswe nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
18. Rega midzi yehupenyu hwangu isuke muropa raJesu.
19. Ini ndinotyora uye kudzima kutuka kwese kunoiswa pavana kuranga vabereki vavo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
20. Ini ndinotyora uye kudzima kutuka kwese kwakaiswa pandiri nekuda kwegodo, muzita raJesu.
Baba ndinokutendai nekundinunura kubva pakutuka kese, kuperetera uye enchantment muzita raJesu.
Previous nyaya40 Minamato Yekutenda yekubudirira mushure mekubvunzurudzwa kwebasa
inotevera40 Mharidzo dzeMunyori Kupesana nedzvinyiriro.
Alfonso Cid Nyamavhuvhu 19, 2019 At 7:34 am
Mwari atiropafadze isu tose.
Cynthia Smith Mbudzi 22, 2020 At 2:22 am
Ameni !! Ndinokutendai, Mufundisi! Rumbidzai Yahuah! Rumbidza Jesu! Ndatenda imi neNzira dzenyu Dzinotyisa & Ruponeso Rwenyu & Kununurwa! Simba rese, Kubwinya & Simba kuna Mwari Wekumusoro-soro !! 🙌🏼👑🙌🏼🕊📖🐑
Mary Zvita 28, 2020 At 11:05 am
Maita basa Mufundisi. Ndinokutendai nekugovana shoko raMwari uye nekundibatsira uye kubatsira vamwe neiyi peji. Mwari akuropafadze iwe nemhuri yako. Ndinonamata kuti mufaro, hutano hwakanaka uye rugare zvive zvako mazuva ese muzita raJesu.
Akindele Ndira 10, 2021 At 6:13 am
Ndatenda mufundisi neminamato iyi
Rachel June 12, 2021 Pa 11: 12 am
Ottila June 25, 2021 Pa 7: 22 am
Kutukwa kwese kunosunganidzwa kubva muhupenyu hwangu uye nemhuri muzita raJesu. Chero kutuka kwanga kuri kushanda zvakasununguka muhupenyu hwangu kuchindimanikidza kubva kufambira mberi & kuroora kana kuroorwa kutyorwa nekukandwa mugungwa muzita rine simba raJesu.
Ndinokutendai Mufundisi nekutendera kwaMwari kuti vakushandisei semudziyo wavo, Mwari varambe vachikutungamirai nekukudza ndima yenyu muzita raJesu, Amen.
Minamato yekutaura Munguva dzekusurukirwa Uye Kushungurudzika
Kununurwa Munamato Pfungwa Pakukunda Iwo Mhepo Yechitendero
Kunamata Kunongedzera Kupokana neKutapwa